Waa maxay VSCO: wax ka ogow dhammaan barnaamijkan iyo shabakadda bulshada | Abuurista khadka tooska ah
Haddii aad tahay qof jecel sawir qaadista, isla mar ahaantaana shabakadaha bulshada, markaa aad ayey macquul u tahay inaad ka warqabto waxa uu yahay VSCO. Laakiin, haddii aysan sidaas ahayn oo aad la kulantid arjigaan sawir iyo muuqaal ah, waa inaad ogaataa inay ka mid tahay kuwa hadda ku jira moodada. Xaqiiqdii, xitaa waxaa jira beel hal abuur leh oo lamid ah Instagram.
Laakiin, Waa maxay dhab ahaan VSCO? Taasi waxay bixisaa? Haddii aad rabto inaad waxbadan ka ogaato qalabkan, markaa ha u joojin akhriska tusahan yar ee aan diyaarinay si wax walba lagugu wargaliyo.
1 Waa maxay VSCO
1.1 Sida loogu soo dejisto arjiga mobilkaaga
2 Sidee VSCO u shaqeysaa
2.1 Miirayaasha VSCO
2.2 Qalabka app
3 Kacaankii haweenka: gabdhaha VSCO
VSCO waa magaca codsi sawir iyo muuqaal ah, laakiin aad ayey muhiim u tahay oo weynaatay, inay awood u yeelatay inay abuurto shabakad bulsheed oo dhan, oo la mid ah Instagram, halkaasoo sawirku yahay waxa ugu weyn. Laakiin maahan qof uun, waxaan ka hadlaynaa sawirro xirfadeed iyo shaqooyin aad u faahfaahsan.
Abuureyaasha codsigan waa Shirkadda Sahayda Muuqaalka, oo khibrad u leh la shaqeynta sawir qaadayaasha xirfadleyda ah. Aad ayey u badan yihiin oo waxay abuureen horudhac loogu talagalay Lightroom ama Aperture, oo ay caan ku yihiin khabiirada sawir qaadista.
Waad ku mahadsan tahay iyaga, VSCO waa waxa ay maanta tahay, laakiin sidoo kale isticmaalka ay adeegsadayaashu siinayaan, taas oo u rogtay shabakad bulsheed oo sawirro tayo sare leh oo tayo sare leh iyo qaab gaar ah lagu muujiyo shaqada (oo aan aad u badnayn raadinaya fudud "sida").
VSCO waxaa hadda loo heli karaa labada Android iyo iOS.
Sida loogu soo dejisto arjiga mobilkaaga
Haddii aad leedahay mobilada Android ama iOS (ama kiniin), soo dejinta arjigu waa mid aad u fudud.
Xaaladda Android, VSCO waxaa laga heli karaa Google Play, markaa haddii aad gasho oo aad magaca geliso mashiinka raadinta, waxay ka muuqan doontaa natiijooyinka ugu horreeya.
Intaa kadib, waa inaad siisaa si aad ugu rakibto oo aad u sugto daqiiqado yar illaa ay ugu dambayntii si firfircoon uga socoto moobaylkaaga si aad u bilawdo isticmaalkiisa.
Waa wax fudud oo ku saabsan macruufka, Tan iyo markii aad tagtay AppStore, ku qoritaanka magaca barnaamijka mashiinka raadinta oo gujinaya midka aad ku rakibeyso waa in ka badan intii ku filan.
Labada xaaladood, waxaad u baahan doontaa inaad sameysato koonto aad ku isticmaasho. Tan awgeed waxaa lagu weydiin doonaa emayl si aad ugu sii socoto tallaabada xigta, taas oo noqon doonta inaad gasho lambarka sirta ah. Waxay sidoo kale kuu ogolaaneysaa inaad ku xirto shabakadaha bulshada, sida Twitter.
Ugu dambeyntiina, waa inaad iska hubisaa sanduuqa aad ku aqbasho shuruudaha isticmaalka oo guji si aad u sameysato koonto.
Laga bilaabo waqtigaas wixii ka dambeeya, waxaad awoodi doontaa inaad sawirradaada ku dhex qaadatid barnaamijka, laakiin sidoo kale soo dhoofso kuwa aad horay ugu qaadatay taleefanka.
Sidee VSCO u shaqeysaa
Markaad barnaamijka ku soo dejiso mobilkaaga, waxaad ka heli doontaa a aad dareen leh oo si fudud loo fahmi karo interface. Waxaad kuheli doontaa kamarad kuu gaar ah isla barnaamijka, inkasta oo aysan bixinayn tayo aad ufiican, laakiin way kufiicantahay inaad sawirro kaqaadid. Hawlaha ay ka mid yihiin, waxaad leedahay toos u fiirsashada, toogashada degdegga ah iyo diiradda gacanta. Tan dambe ayaa ah tan ugu qadarinta badan kuwa adeegsada arjiga.
Si kastaba ha noqotee, meesha ay inta badan ka taagan tahay, shaki la'aan, miirayaasha iyo qalabka ay ku siiso. Waxaan uga hadleynaa si qoto dheer.
Barnaamijka VSCO wuxuu leeyahay miirayaal kala duwan. Waxaa jira bilaash iyo lacag bixin, taas oo laga iibsan karo isla barnaamijka. Iyo tan ugu fiican, mid kasta oo iyaga ka mid ah wuxuu leeyahay ikhtiyaarro u gaar ah oo qaabeyn ah, taas oo kuu oggolaaneysa inaad astaysto oo aad u adeegsato siyaabo kala duwan. Tusaale ahaan, waad beddeli kartaa miisaanka, midabbada, isbarbardhiga, diiradda, isu dheelitirka ...
Qalabka aad ka heli karto arjiga, waxaa jira qaar aad u cajaa'ib badan. Midka koowaad shaki kuma jiro GRID. Waa ikhtiyaar ikhtiyaar ahaan sida aad ugu soo rogi kartid sawirrada aad qaadatid "maktabadda sawirka" Hadafku waa in isticmaaleyaashu ay wadaagaan sawirada ay qaadaan oo ay wax ka beddelaan si ay u abuuraan ururinta oo ay markaa u abuuraan sheeko. Dabcan, waa goob "shaqsiyadeed", halkaas oo aad ka heli doontid sawiradaada oo ay la jaan qaadi doonaan dhammaan aaladaha koontadaadu furantahay.
Iyada oo aad awoodid la wadaag sawirada shabakadaha bulshada ama barnaamijyada. Xaqiiqdii, waa wax iska caadi ah inaad la kulanto tixraac VSCO barta Instagram.
Qalab kale oo ay leedahay waa shabakadda bulshada. Iyo, iyada oo loo marayo qaybta "Discover", waxaad baari kartaa sawirada xirfadlayaal kale oo raaci kartaa isticmaaleyaasha ama aad layaabi kartaa astaamaha bulshada ee la sii daayay.
Markaad tixgeliso in maanta ay tahay mid ka mid ah barnaamijyada ay aadka u qiimeeyaan da'yartu, maxaa yeelay waxaa ku jira qalab lagu tafatiri karo sawirro leh miirayaal aad u kala duwan oo shaqsiyadeed, iyo shabakad bulsheed, layaab ma leh in dad aad iyo aad u tiro badan laga maqlo iyada .
Kacaankii haweenka: gabdhaha VSCO
Gabdhaha VSCO ama gabdhaha VSCO. Tani waa sida loo yaqaan gabdhaha da'da yar ee ku jira shabakada bulshada ee arjiga. Iyo, inkasta oo ay jiraan akoonno badan oo ragga ah, waa in la aqoonsadaa in barxadda ay inta badan ka kooban yihiin haween.
Ahaanshaha gabar VSCO waxay leedahay macno kala duwan. Waana inay sida caadiga ah ku sifoobaan inay yihiin haween xidhan dhar aad isugu eg, oo dhaqan isku mid ah ka dhexeeya. Sidan oo kale, muuqaalka, muuqaalka, iyo xitaa habka loo dhaqmo, ayaa iyaga ka dhigaysa in loo tixgeliyo inay ka mid yihiin kooxdan.
Waxaa sidoo kale jira faahfaahinta qaarkood ee iyaga "u siiya" iyaga oo ah gabdhaha VSCO, sida qaadista Hydro Flask ama kanteel la mid ah oo leh istiikarada Redbubble; tag la xoqo curcurka, sida jijin; T-shirt sare oo la jarjaray Waxay sidoo kale xiran karaan silsilad qolof ah iyo boorsada sumadda Fjällräven.
Si kastaba ha noqotee, waxaas oo dhan ee aan soo sheegnay waxay keeneen isreebreebka kale ee kooxdan: cad, taajir iyo dhuuban. Waana in boorsooyinka dhabarka ama makhaayaddu aysan ahayn waxyaabo jaban, waxay gaari karaan in ka badan 100 euro. Intaas waxaa sii dheer, waxaa loo kala saaray "posh", maxaa yeelay wax kasta oo ay haystaan ​​waa la calaamadeeyay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Sawir » Waa maxay VSCO